Isakhiwo sokuqala sensimbi emhlabeni sakhiwe ngamahora angama-28 ukwakha izitezi eziyi-11, sisebenza impilo efinyelela eminyakeni eyinkulungwane - China Foshan Hermes Steel
Isakhiwo sokuqala sensimbi emhlabeni sakhiwe ngamahora angama-28 ukwakha izitezi eziyi-11, ngempilo yesevisi efinyelela eminyakeni eyinkulungwane
Iphrojekthi yokuhlala enendawo ephelele yamamitha-skwele angama-3,000 esitezi se-11 emahoreni angama-28 yethulwe ngokusemthethweni e-Changsha ngomhla ka-16. "Ngumsebenzi" weBroad Buildable Technology Co, Ltd., inkampani engaphansi kweHunan Broad Technology Group, ebizwa nge "Living Building", futhi eyisakhiwo sokuqala sensimbi esingenasici emhlabeni.
Inqubo yokwakhiwa kwalesi sakhiwo sokuhlala kufana nokwakha imoto, usebenzisa izindlela zezimboni ukuguqula imodeli yokwakha yendabuko. Isisebenzi endaweni yesigameko sitshele izintatheli ukuthi impilo yokusebenza kwale ndlu ingafinyelela eminyakeni eyinkulungwane.
Mayelana nesizathu sokwakhiwa "kwezakhiwo eziphilayo", uZhang Yue, usihlalo kanye nomongameli weBroad Group, uthe izakhiwo zensimbi zingashintsha izakhiwo zendabuko ukumelana nokuzamazama komhlaba. Isizathu sesibili ukonga amandla nokushisa izakhiwo kahle.
Lesi "sakhiwo esiphilayo" sisebenzisa "ipuleti lensimbi engagqwali" yaseYuanda. Isakhiwo sonke asisebenzisi ukhonkolo futhi senziwe ngo-100% efektri. Ukufakwa kwesayithi kulula kakhulu. Ihanjiswa esitsheni esingamamitha angu-40 futhi ingahanjiswa kuzo zonke izingxenye zomhlaba ngaphandle kwemingcele nezindleko eziphansi. Ngesikhathi ubhadane lwango-2020, uhlobo lwaseNingizimu Korea lwe- "Huoshenshan Hospital" lusebenzise ibhilidi lomgogodla wensimbi engagqwali i-Yuanda.
"Ikhiqizwa ngezindlela zasembonini futhi inokuphepha okuphezulu kakhulu. Inezici zensimbi engagqwali, ukufudumeza ukushisa okuphezulu, ubuchwepheshe obujulile, nezindleko eziphansi." UZhang Yue uthe ngokwakhiwa kwensimbi engagqwali, kungashintsha ukudilizwa kwezindlu emashumini ambalwa edlule. Isimo sengcebo yabantu singadluliselwa ezinkulungwaneni zeminyaka. Wethula ukuthi amabhilidi aphilayo aguquguquka ngokweqile ngokwezinhlobo zezakhiwo, izinhlobo zamayunithi, izinhlobo zamagumbi, nokwengeza nokususa phansi. Zingasetshenziselwa ukwakha izindlu zikanokusho ezisezingeni eliphezulu, amahhotela ezinkanyezi ezinhlanu, amabhilidi amakhulu, nezindlu ezibiza izindleko zomphakathi wonkana.
U-50% womoya okhishwa emhlabeni uvela ezakhiweni. Uma sinciphisa ukusetshenziswa kwamandla ngo-80 kuya ku-90% ezakhiweni, kuzolingana no-40% wokukhishwa kwekhabhoni yomhlaba esikhathini esizayo. "Leli yithuba elikhulu lokunciphisa ikhabhoni." UZhang Yue uveze ukuthi "isakhiwo esiphilayo" sisebenzisa ukufakwa okunamandla, amawindi amaningi engilazi, nokubuyiselwa kokushisa komoya okusha, okunganciphisa ikhabhoni ngo-80% kuye ku-90% uma kuqhathaniswa nezakhiwo ezijwayelekile. Ingachazwa njengezitimela zomhlaba "ezingathathi hlangothi".
Ngosuku olufanayo kubanjwe nengqungquthela ye-Huolou Technology Imagination. Lowo owayenguNobhala-Jikelele we-UN uBan Ki-moon uthe enkulumweni eyisihluthulelo ayibeke kwividiyo engqungqutheleni wathi ayikho enye indlela yokuxazulula inkinga yokuguquka kwesimo sezulu ngaphandle kokukhishwa komoya ongena-zero. Ama-emitters amakhulu e-carbon afana ne-United States, China, Japan, South Korea, namanye amazwe ase-Europe amemezele ukuthi u-2050 noma u-2060 kuzoba unyaka ohlosiwe wokukhishwa kwe-zero zero. Umgomo we-Millennium Architecture obekwe yi-Broad Living Building uhlobene kakhulu nomgomo we-11 we-United Nations Sustainable Development Goals, okungukuthi "amadolobha asimeme nemiphakathi".
Ongoti bezobunjiniyela bezakhiwo bathi yize izakhiwo ezisezingeni eliphakeme zisezingeni eliphansi kunentengo yezakhiwo zendabuko. Ubuchwepheshe bezinkampani zaseShayina "bokuhlala" bunamandla amakhulu okungena emakethe yomhlaba.
Lokhu okungenhla okuqukethwe "Ukwakhiwa kwesakhiwo sensimbi engagqwali sokuqala emhlabeni okubonisa isivinini seChina, izitezi eziyi-11 ezakhiwe ngamahora angama-28" ezilethwe nguwe ngumgudu wezindaba zokwakha. Isiteshi sezindaba sokwakha sizoqhubeka nokunaka izindaba ezishisayo ezengeziwe. Uyemukelwa ukusilandela futhi unake ukwakhiwa. Imboni izindaba ezishisayo ~